Muxuu Ilaahay Dunida u Abuuray? | War Wanaagsan
1. Muxuu Ilaahay dunida u abuuray?
Yehowah dunida wuxuu siiyay binuʼaadankoo dhan rag iyo dumarba. Waa hooygeenna. Sidaas darteed bay xaaskii ugu horreeyay oo ahaa Aadan iyo Xaawa loogu abuurin inay samada ku noolaadaan. Horey buu Ilaahay u abuuray inay malaaʼigtu ku noolaadaan samada. (Ayuub 38:4, 7) Ilaahay ninkii u horreeyay wuxuu dejiyay janno qurux badan oo la yiraahdo beerta Ceeden. (Bilowgii 2:15-17) Isaga iyo farcankiisana Yehowah wuxuu siiyay rajo ay ku raaxaystaan nolol weligeed aan dhammaanayn.—Akhri Sabuurradii 37:29; 115:16.
Bilowgii beerta Ceeden oo keliya baa ahayd janno. Waxay ahayd inay Aadan iyo Xaawa carruur dhalaan oo iyaga iyo farcankoodii dhulka ay ka buuxsamaan. Waqti kaddib waxay ahayd inay adduunkoo dhan dhaqaaleeyaan oona ka dhigaan janno. (Bilowgii 1:28) Dunida weligeed lama baabbiʼin doono waa binuʼaadanka hooygooda.—Akhri Sabuurradii 104:5.
Daawo fiidiyowga Muxuu Ilaahay Dunida u Abuuray?
2. Maxay hadda dunidu u ahayn janno?
Aadan iyo Xaawa Ilaahay may addeecin. Markaas buu Yehowah beertii ka saaray. Jannadii way luntay qofna ku ma guuleysan inuu dib u asaaso. Kitaabka Quduuska ah baa yiri: “Dhulka waxaa gacanta loo geliyey kan sharka ah.”—Ayuub 9:24.—Akhri Bilowgii 3:23, 24.
Yehowah miyuu fulin waayay qasdigiisii ugu horreeyay oo uu ugu talaggalay binuʼaadanka? Maya! Waayo Qaadir buu yahay. Ma guuldarraysan karo. (Ishacyaah 45:18) Binuʼaadanka dib buu ugu soo celin doonaa sidii uu ugu talaggalay.—Akhri Sabuurradii 37:11, 34.
3. Sidee baa dunida Janno dib looga dhigi doonaa?
Wuxuu dhulku Janno noqon doonaa markuu Ciise oo ah Boqorkuu Ilaahay doortay dunida maammulo. Dagaalka la yiraahdo Armageddoon buu Ciise hoggaamin doonaa malaaʼigta Ilaahay. Iyagu waxay baabbiʼin doonaan kuwa Ilaahay ka soo horjeeda. Markaa kaddib Ciise wuxuu xiri doonaa Shayddaanka kun sanadood. Dadka Ilaahay addeeca ma dhiman doonaan waayo Ciise baa hoggaamin doona oona ilaalin doona. Waxay weligood ku raaxaysan doonaan Janno ku taalla dhulka.—Akhri Muujintii 20:1-3; 21:3, 4.
4. Goormay rafaadka iyo silicu dhammaan doonaan?
Goormuu Ilaahay sharka dunida ka dhammeyn doonaa? Ciise wuxuu ina siiyay ‘calaamad’ inoo tilmaamayso inuu dhammaadku dhow yahay. Xaaladaha dunida maanta waxay khatargelinayaan nolosha binuʼaadanka. Taas waxay muujisaa inaan ku nool nahay ‘dhammaadka waqtiga dunida.’—Akhri Matayos 24:3, 7-14, 21, 22.
Kunka sanadood uu Ciise maammulka samada ku haysto ayuu dunida rafaad iyo silic oo dhan ka baabbiʼin doonaa. (Ishacyaah 9:6, 7; 11:9) Ilaahay baa isticmaali doona Ciise inuu baabbiʼiyo jirro, gabow iyo dhimasho. Dembiga dadka Ilaah jecel buu masaxi doonaa. Waayo Ciise Boqor iyo Wadaad Sare buu ahaan doonaa.—Akhri Ishacyaah 25:8; 33:24.
5. Ayaa ku noolaan doona Jannada?
Meesha Markhaatiyaasha Yehowah ku kulmaan baa laga helaa kuwa Ilaahay jecel oona isaga ka farxiya
Kuwa doonista Ilaah yeela baa ku noolaan doona Jannada. (1 Yooxanaa 2:17) Ciise wuxuu u diray xertiisa inay raadiyaan kuwa camalka qabow oona baraan siday Ilaahay uga farxiyaan. Maanta Yehowah wuxuu tababbarayaa malaayiin siday Janno dhulka ku taal ugu noolaadaan. (Sefanyaah 2:3) Kulammada Markhaatiyaasha Yehowah waxay dadku ka bartaan siday u noqdaan niman afooyinkooda iyo carruurtooda u roon oo dumarkuna siday nimankooda iyo carruurtooda ugu roonaadaan. Carruurta iyo waalidkoodu Ilaahay bay isla wada caabudaan oo waxayna bartaan sida ay uga faaʼiidaysan lahaayeen warka wanaagsan.—Akhri Miikaah 4:1-4.
Wadaag Wadaag Muxuu Yahay Qasdiga Ilaahay oo ku Saabsan Dunida?